ဂျီမေး - မှတ်စုစာအုပ်
မူလစာမျက်နှာ‎ > ‎ဂ‎ > ‎
သိမ်းဆည်းမှု ထပ်မံတိုးမြင်.ရန် ဌားရမ်းခ အနေနဲ. (20GB) တစ်နှစ်စာအတွက် အမေရိကန် ၅ ဒေါ်လာ ၊16 TBတစ်နှစ်စာ အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၀၉၆ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အေပရယ်လ ၁ ရက်နေ. ဂျီမေး နှစ်ပတ်လည် နေ့မှာ ဂျီမေး ရဲ. စီမံခန်.ခွဲမှု မန်နေဂျာ Georges Harik က (1GB)ထပ်မံတိုးမြှင်.ပေးရန် ကြေငြာခဲ.ပြီးဂျီမေးကနေ အသုံးပြု သူ များအတွက် သိမ်းဆည်းထားနိူ်င်မှုများ ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ် လို. ပြောကြားသွားခဲ.ပါတယ်။
ဂျီမေး ကို Paul Buchheit ကဖန်တီးခဲ.ပြီး နောက်ပိုင်းမှ အများသုံးအဖြစ်ကြေငြာနိူင်ခဲ.ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ google မှ ၀န်ထမ်းများ ကုမ္ပဏီအတွင်းသာ အသုံးပြုခဲ.ပြီး အေပရယ်လ ၁ရက်နေ. ၂၀၀၄ မှာမှ အများပြည်သူသုံးအဖြစ်ကြေငြာနိူင်ခဲ.ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ.မှာ IMAP ကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီမှုအနေနဲ. ထပ်ပေါင်း အသုံးပြုခဲ.တယ်လို.ဆိုပါတယ်။